आफु भन्दा ,१५ वर्षे कान्छो प्रेमीसँग रमाउँदै सुस्मिता !!! – News Nepali Dainik
आफु भन्दा ,१५ वर्षे कान्छो प्रेमीसँग रमाउँदै सुस्मिता !!!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १६, २०७७ समय: १८:१३:५३
****रोहमन र सुस्मिताबीच १५ वर्षको फरक छ। सुस्मिता ४४ वर्षकी भइन् भने रोहमन मात्र २९ वर्ष
***रोहमनले उनीसँग तपाईंकै उमेरबराबर भनेर ढाँटे। तर उनले पत्याइनन्। भन्छिन्, ‘तिमी धेरै जवान देखिन्छौ भनेपछि उनलाई कुराकानी गर्न असहज लाग्थ्यो
*#*#*#सुस्मिताका अनुसार सुरुआतमा रोहमनले उनीसँग तपाईंकै उमेरबराबर भनेर ढाँटे। तर उनले पत्याइनन्। भन्छिन्, ‘तिमी धेरै जवान देखिन्छौ भनेपछि उनलाई कुराकानी गर्न असहज लाग्थ्यो। तर हाम्रो नाता ईश्वरले चुनेका थिए।’
(केहि पहिला उनले प्रेमीसँग गरेको हट योगाले पनि निकै चर्चा पाएको थियो ।)
Last Updated on: January 29th, 2021 at 6:13 pm